BluRay 1080p 5.1 CH – Quality – Channel Myanmar
Poupelle of Chimney Town (2021) Poupelle of Chimney Town (2020) ========================= IMDb Rating - 6.4/10Chimney Town (မီးခိုးခေါင်းတိုင်မြို့) ဆိုတဲ့ မီးခိုးတွေနဲ့အမြဲပိတ်နေပြီး အပြင်လောကကြီးနဲ့ လုံးဝအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့မြို့လေးက လုဘိချိ ဆိုတဲ့‌ကောင်လေး နဲ့ အမှိုက်လူသား ဖြစ်တဲ့ ပိုပဲ့လုတို့ရဲ့ စွန့်စားခန်းကို ငိုလိုက် ရယ်မောလိုက်နဲ့ ရသစုံလင်စွာ ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ လုဘိချိရဲ့ အဖေဖြစ်သူ ဘရူနို က ကောင်းကင်မှာကြယ်တွေရှိကြောင်း လူတွေကြားထဲမှာပြောလေ့ရှိတယ်။အဲ့မြို့ကလူတွေက‌တော့ "ဟာ ဒီကောင် င‌ပေါကြီး" ဘာညာနဲ့ သူပြောကိုမယုံကြဘူး မြို့တစ်ခုလုံးက မီးခိုးခေါင်းတိုင်တွေကထွက်တဲ့ မီးခိုးတွေနဲ့ပိတ်နေတာကိုး ဒါပေမယ့် သူ့သားကတော့ ကြယ်တွေကို အရမ်းကြည့်ဖူးချင်နေတာ အဲတာနဲ့ တစ်နှစ်လောက် ကြာသွားပြီး ဟောလိုးဝင်းနေ့မှာ တစ်ကိုယ်လုံးအမှိုက်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အမှိုက် လူသား တစ်ယောက် မြို့ထဲကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ အဲ့နေ့ကလည်း ဟောလိုးဝင်းဆိုတော့ အားလုံးက သူ့ကို လူလို့ပဲထင်ပြီး ဝတ်စုံဘယ်လောက်မိုက်ကြောင်း ချီးကျူးကြတာပေါ့ နောက်မှ လူမဟုတ်မှန်းသိသွားကြတော့ သက်ဆိုင်ရာတွေက လိုက်ဖမ်းလို့ ထွက်ပြေးရင်း လုဘိချိ နဲ့တွေ့ပြီး သူတို့ရဲ့စွန့်စားခန်းလေး စတင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီ ဇာတ်ကားလေးက နာမည်ကြီးရုပ်ပြကာတွန်းစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ "Poupelle ...
Poupelle of Chimney Town (2021)
Still Walking (2008) Still Walking (2008) =============== Directed By Hirokazu Koreeda IMDb Rating - 7.9/10ဇာတ်အဖွင့်မှာ Koreedaဟာ မိသားစုတစ်စုရဲ့ သေသူ၊ ရှင်ကျန်သူတွေ ပြန်ဆုံစည်းကြတဲ့ နေ့တစ်နေ့ကို ခေါ်သွားတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ မပျက် မကွက် လမ်းလျှောက်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဆီခေါ်သွားတယ်။ အဲဒီမိသားစုက လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ စိတ်ထဲကို ခေါ်သွားတယ်။ သူတို့မိသားစုရဲ့မရှိတော့တဲ့ သူတို့အတွက်အဖိုးအတန်ဆုံး တစ်ယောက်ဆီ ခေါ်သွားတယ်။ သူတို့ရဲ့ဆန္ဒ တွေဆီ ခေါ်သွားတယ်။ ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့ မိုးလင်းသွားတယ်။ တစ်ချို့ဆန္ဒ တွေက ဘယ်တော့မှမဖြစ်လာခဲ့ကြသလို တစ်ချို့က ဒီလမ်းကို ဆက်မလျှောက် နိုင်ကြတော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျန်နေခဲ့သူတို့ကတော့ ဆက်လျှောက်နေရတုန်း။ Koreedaဟာ ကျွန်တော်တို့ကို ဒီမိသားစုက လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ စိတ်အနေ အတိတ်တွေကို ပြတော့ပြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပေါ်လွင်အောင်တော့ မပြပါဘူး။ စကားတစ်ခွန်းနဲ့ အဲဒီစကားနောက်မှာ ဖြစ်သွားတဲ့ ဇာတ်ကောင်ရဲ့ အမူအရာနဲ့ကို ချိတ်ဆက်ပြီး ပြသွားတယ်။Koreedaရဲ့ Still walkingဟာ ဟဲမင်းဝေးရဲ့ ရေခဲတုံးကြီးလိုပါပဲ။ Koreedaဟာ ကျွန်တော်တို့ကို သူပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ရေခဲတုံးကြီးရဲ့ ပေါ်နေတဲ့အစွန်းကလေးကိုပဲ ရိုက်ပြသွားပေမဲ့ ကြည့်ရှုသူကိုတော့ ...
Simmer (2020) Simmer (2020) =========== IMDb Rating 6.3/10အမေရိကန် မက္ကဆီကန် နယ်စပ်မှာဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ ပြဿနာကို ဇာတ်အိမ်တည်ထားတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ် ။ အီးကနက်စ်ဆိုတဲ့ စားဖိုမှူးဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့ မက္ကဆီကန်စားဖိုမှူးဖြစ်ပြီး သူ့မိသားစု၀င်တွေ မက္ကဆီကိုဘက်ကို နယ်နှင်ခံရမယ့် အရေးနဲ့ကြုံနေရပါတယ် ။ အစိုးရကလည်း ဒေါ်လာ ၂ သောင်းပေးရင် ချက်ချင်းနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ပေးမယ်လို့ ကြော်ငြာလိုက်ပြီး အီးကနက်စ်အတွက် အရေးကြီးငွေလိုလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ အလုပ်၀င်လုပ်ရင်း အဲ့ဒီစားသောက်ဆိုင် ပိုင်ရှင်ရဲ့ စားဖိုမှူးတစ်ဖြစ်လဲ နောက်ကွယ်မှာ မှောင်ခိုဈေးကွက်ကို တရားမ၀င်ပစ္စည်းပို့ ဒါရိုက်ဘာအဖြစ်သို့ အလိုလိုရောက်ရှိ ငွေရှာနေခဲ့ရတာပေါ့ ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဟာလည်း သူထင်ထားသလို လူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘဲ သူ့မိသားစု အသက်အန္တရာယ်ကိုပါ ထိခိုက် ရန်ရှာလာတဲ့အခါမှာတော့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကို ဒီကားလေးမှာ ကြည့်ရမှာပါ။ (ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့အညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Thiha Yan Naing ဖြစ်ပါတယ်)File Size..........(1.0 GB) / (475 MB) / (280 MB) Quality............BluRay 1080p / 720p / 480P Duration.........1Hr 36mins Subtitle...........Myanmar Hardsub Format............MP4 Genre..............Comedy Translator.......Thiha Yan Naing Encoder..........SWM
Girls Gone Dead (2012) Girls Gone Dead (2012)=================(18+ Warning ......သွေးသံတရဲရဲတွေ၊ အဖော်အချွတ်တွေ၊ ညစ်ညမ်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ ပါဝင်သည့်အတွက် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြိးမှသာ ကြည့်ရန်နှင့် မိသားစုနှင့်အတူ ကြည့်ရန် မသင့်ပါ။)၂၀၁၂ ခုနှစ်က ထွက်ရှိထားတဲ့ Thriller ကားလေးကို တင်ဆက် ပေးလိုက်ပါတယ်။ သွေးသံတရဲရဲနဲ့ လူသတ်မယ်၊ မိန်းကလေး လှလှလေးတွေရဲ့ အလှအပကို မြင်ရမယ် အဲလို သမာရိုးကျ လူသတ်ကားမျိုးကို ကြိုက်နှစ်သက်တွေအတွက်တော့ ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးပါပဲ။ဇာတ်လမ်းအကျဥ◌်းလေးပြောပြရရင် သူငယ်ချင်း ၆ ယောက်ဟာ ‌ နွေရာသီအားလပ်ရက် ကောလိပ်ပိတ်ရက်မှာ ခရီးတစ်ခုကို ထွက်ခဲ့ ကြပါတယ်။ ရေဘက္ကာဟာ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတဲ့ အမေဖြစ်သူထံမှ ခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီး အဆိုပါခရီးစဥ်မှာ လိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်စုဟာ အိမ်တစ်အိမ်မှာတည်းခိုရင်း ပျော်ကြပါးကြနဲ့ အပန်းဖြေနေရင်း လူတစ်ယောက်က သူတို့ကို စောင့်ကြည့်နေတာ ကိုတော့ မသိခဲ့ကြပါဘူး။မျက်နှာဖုံးစွပ်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ အလယ်ခေတ်က စစ်ပွဲတွေမှာ ကိုင်ဆောင်တဲ့ တူနဲ့ ပုဆိန်တွေကို အသုံးပြုပြီး အဆိုပါ ကောင်မ‌လေးများကို အမဲလိုက်သလို လိုက်လံသတ်ဖြတ်ပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် ရေဘက္ကာတို့ သူငယ်ချင်းတစ်စု အသက်ရှင်နိုင်ပါ့မလား။ အသက်ရှင်ဖို့ ...
Don’t Go Breaking My Heart2(2014) Don't Go Breaking My Heart2(2014) ==========================IMDb Rating - 5.6/102011 ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားတဲ့ Don’t go breaking my heart ကားလေးကတော့ သုံးနှစ်တာစောင့်ဆိုင်းမှုအပြီးမှာ ဒုတိယအတွဲအနေနဲ့ထွက်လာပြီး ပရိသတ်ရင်ကို ဆွဲကိုင်လှုပ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ အရင်အပိုင်းကို မကြည့်ရသေးရင်တော့ အရင်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါမှာ အားရပါးရလောင်ရပြီး၊ အားရပါးရကြည်နူးရမှာဗျ။(** အပိုင်း(၁) မကြည့်ရသေးရင် အခုအညွှန်းက Spoiler ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ **)အပိုင်း(၁) >>> Click Hereဒုတိယအပိုင်းမှာတော့ ခြေငြိမ်ဖို့ဟန်ပြင်ခဲ့တဲ့ ကျန်းရှန်ရန်တစ်ယောက် ယန်ယန်ရန်ဆိုတဲ့ မမကြီးနဲ့ချစ်သွားကြပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ “အချစ်ဦးကို သေခါမှမေ့”ဆိုတဲ့အတိုင်း အတိတ်က ချန်ကျီရှင်းကိုသတိရတိုင်း အတူတူနေခဲ့တဲ့အိမ်လေးဆီသွားပြီး လွမ်းနေတုန်းပါပဲ။ ကမ္ဘာကြီးကဘယ်လောက်တောင်ကျဉ်းလဲဆိုတော့ ချန်ကျီရှင်းရဲ့အလုပ်ရှင်သစ်က ယန်ယန်ရန်ဖြစ်နေပြီး သူ့အစ်ကိုပေါလ်ကလည်း ယန်ယန်ရန်ကိုတစ်ဖက်သတ်သဘော ကျနေသူပါ၊အချစ်တွေများလွန်းတဲ့ ကျန်းရှန်ရန်တစ်ယောက် အချစ်ဦးချန်ကျီရှင်းနဲ့ပြန်တွေ့ရပြီး လက်ထပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ယန်ယန်ရန်ကိုလည်း တစ်ခြားသူကလာကြိုက်နေတော့ ဘယ်သူ့ကိုရွေးမှာလဲ? ဘယ်သူ့ကိုချစ်ရမလဲ? အချစ်စစ်ဆိုတာရော တကယ်ရောရှိရဲ့လား? စတဲ့မေးခွန်းတွေအတွက်အဖြေကို အလွဲလေးတွေ၊ ဟာသလေးတွေ၊ ရိုမန့်စ်လေးတွေနဲ့ ရိုက်ပြထားတာမို့ ဒီကားလေးလည်း ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါဦး။(ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့အညွှန်းကို Jo Jo ...
Don’t Go Breaking My Heart (2011) Don't Go Breaking My Heart (2011) =========================IMDb Rating - 6.5/102011 ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့ပြီး 2011 Best Asian Award ရရှိထားပြီး Louis Koo၊ Gao Yuan Yuan နဲ့ Danial Wu စတဲ့နာမည်ကြီးတွေ အတွဲညီညီရိုက်ကူးထားတဲ့ အချစ်ဒရာမာကားလေး လာပါပြီ။♥ ကိုယ်တို့သုံးယောက်ဆက်ဆံရေးမှာ အဆုံးသတ်တော့ရှိရမှာပဲ။ တစ်ခုခုတော့ ရွေးချယ်ရမှာပဲဆိုတဲ့ အချစ်ကိုယုံကြည်ပြီး စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အချစ်ကြီးသူ ဖန်းချီဟုန်း ။♥ ယောက်ျားလေးဆယ်ယောက်မှာ ကိုးယောက်ကခြေရှုပ်ကြတယ်။ ကျန်တဲ့ တစ်ယောက် ကတော့ ခြေရှုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ဆိုပြီး ဆင်ခြေအမြဲပြတတ်တဲ့ စော်ကြည်ဘဲ ကျန်းချန်ရန် ။♥ ကျွန်မ သူ့ကိုအရမ်းချစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုတော့ရှင့်ကိုချစ်မိသွားပြီဆိုပြီးတော့ ခံစားချက်ခြယ်လှယ်ရာကို မျက်စိစုံမှတ်ပြီး နှစ်မြောနေတတ်တဲ့ ချန်ကျီရှင်း ။သူတို့သုံးယောက်ရဲ့ကံကြမ္မာကလည်း အချစ်ဆိုတဲ့ဝင်္ကပါထဲ တစ်ဝဲလည်လည်ပါပဲ။ ကြည့်နေရင်းနဲ့ကြည်နူးရမယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အားမလိုအားမရဖြစ်လာမယ်။ ခံစားချက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်ပြီး သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်းရှိသူဆိုရင်တော့ ချက်ချင်းဒေါင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါတော့။ လုံးဝလက်မလွတ်သင့်တဲ့ကားကောင်းလေးတစ်ကားလို့ ညွှန်းဆိုချင်ပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့သရုပ်ဆောင်သုံးယောက် ဘယ်လောက်တောင်ဓါတုဗေဒမိလဲဆိုရင် အတွဲ(၂) ဆက်ရိုက်ဖို့ တောင်းဆိုကြတဲ့အထိပဲဆိုတော့ မြန်မြန်လေးခံစားကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ....(ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့အညွှန်းကို ...
France (2021) France (2021)===========IMDb Rating - 5.9/10သူ့နာမည်က ဖရန့်စ်၊ နာမည်ကြီးရုပ်သံတင်ဆက်သူတစ်ယောက်။ ပြင်သစ်တစ်နိုင်ငံလုံး သူ့ကိုချစ်ကြတယ်၊ သူ့အစီအစဉ်ဆိုမလွှတ်တမ်းကြည့်တဲ့သူတွေတောင်ရှိတယ်၊ နာမည် ကြီးလေ သူများမလုပ်တဲ့ အစီအစဉ်တွေကိုသူလုပ်ချင်လေပဲ၊အခြားဂျာနယ်လစ်တွေ မရိုက်တဲ့အစီအစဉ်မျိုးတွေဆို သူကရိုက်လေ့ရှိတယ်၊ အဲ့တော့နာမည်ကြီးတယ်ဝင်ငွေ ကောင်းတယ်၊ ပိုက်ဆံရှိတယ်။ ပိုက်ဆံရှိတယ်ဆိုပေမယ့် အိမ်ထောင်ရေးကအေးတိအေးစက်၊ မွေးထားတဲ့သားတစ်ယောက်ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မစောင့်ရှောက်နိုင်လောက်တဲ့ အထိကိုအလုပ်များတယ်၊ တစ်နေ့သူ့သားလေးကို ကျောင်းပို့ရင်း ဘတ်စတစ်ဆိုတဲ့ ကောင်လေး ကို ကားတိုက်မိတယ်၊ ဘတ်စတစ်တို့မိသားစုက ဆင်းရဲတာကြောင့်ရယ်၊ သူ့ပရိသတ်ဖြစ်နေတာ ကြောင့်ရယ် လျော်ကြေးပေးလိုက်ပေမယ့်၊ သူနဲ့ပြိုင်ဖက် ဂျာနယ်လစ်နယ်ပယ်မှာတော့ သတင်းထူး ဖြစ်ပြီး မျက်နှာဖုံးတွေမှာပါသတင်းခေါင်းစဉ်ကြီးနဲ့ဖော်ပြတယ်။ LIVE Show တွေမှာပါ အရှက် ရလောက်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တယ်။ နာမည်ကြီးစတားတစ်ယောက်က တစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးမကြုံဘူးတဲ့ ဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့်သူဘဝ ပြောင်းလဲသွားပုံစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားတာကြောင့် ပရိတ်သတ်များအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ (ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့အညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Tin Myo Lwin ဖြစ်ပါတယ်)File Size - (1.16 GB) / (576 MB) / (394 MB) Quality – BluRay 1080p / 720p/480p Duration - ...
Stuart Little2(2002) Stuart Little2(2002)=================ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ 2002 ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့ပြီး ဒါရိုက်တာ Rob Minkoff က ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ family/comedy ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာဆိုရင်တော့ Little မိသားစုကြီးရဲ့ သားအလတ်ဖြစ်တဲ့ ကြွက်ကလေး Stuart ကို အရွယ်သေးငယ်လို့ဆိုပြီး မိခင်က နေရာတကာ စိတ်မချဖြစ် အစိုးရိမ်လွန်နေ ရပေမယ့် Stuartကတော့ စွန့်စားခန်းဖွင့်ရတာကို သိပ်သဘောကျတဲ့သူတစ်ဦးပါ။ တစ်နေ့မှာ ရန်သူ့ရဲ့လက်ကနေ ထွက်ပြေးလာတဲ့ ငှက်မလေး Margalo နဲ့ တွေ့မိပြီး ခင်မင်သွားကြတဲ့ နောက် Stuart ရဲ့အိမ်ကို Margalo လိုက်နေခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်တော့ ရန်သူတော်ကြီးနဲ့ Stuart တို့ ဘယ်လိုတွေဆက်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ကြမလဲ Margalo နဲ့ ရန်သူကြီးကရော ဘယ်လို တွေပတ်သက်မှုရှိနေလဲ စတဲ့ လျှို့ဝှက်စွန့်စားခန်းတွေကို မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိသားစုဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်လွင်စေတဲ့ ၅၂၈ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို ပုံဖော်ရိုက်ကူး ပြသထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ။ (ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့အညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ May Thet Khine Soe ဖြစ်ပါတယ်)File Size ...
Mythica: The Godslayer (2016) Mythica: The Godslayer (2016)========================ဒီဇာတ်ကားအကြောင်းကို မပြောခင် ဒီကားဟာ Mythica ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ငါးကားတွဲထွက်ရှိထားတဲ့အထဲကမှ ဇာတ်ကားတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ Mythica ဆိုတာကတော့ Adventure, fantasy, action ခေါင်းစဉ်အောက်မှာတည်ရှိပြီး adventure fantasy တို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း orc, dragon , witch , elf , god အစရှိသဖြင့် အမျိုးစုံအောင် ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးအနေနဲ့ကတော့ လက်ရှိကမ္ဘာမြေဟာ နတ်ဘုရားတွေကို အပြီးတိုင် ချေမှုန်းချင်နေတဲ့ Lich King နဲ့ သူ့ရဲ့ zombie စစ်တပ်ကြီးနဲ့၊ တစ်ဖက်မှာ လူသား၊ နတ်နဲ့ အခြားသောမျိုးနွယ်တွေ စစ်ခင်းနေရတဲ့ကာလ ဖြစ်ပါတယ်။ Lich King နဲ့ သူ့စစ်တပ်ကြီးဟာ ဘယ်မျိုးနွယ်နဲ့မှ အင်အားချင်းမယှဉ်သာအောင် တရိပ်ရိပ်တက်လာလို့နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် Lich King ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ နတ်ဘုရားတွေ အကုန်လုံးကို သုတ်သင်ဖို့ရာ ကျိန်စာသင့်နေတဲ့ Marek ဆိုတဲ့ စုန်းမလေးက အဓိကကျတဲ့နေရာမှာ ပါ၀င်နေပါတယ်။ ...
Under the Open Sky (2020) Under the Open Sky(2020) ====================IMDb Rating - 7.1 ၊ Rt - 95%ဝေဖန်ရေးသမားတွေကတော့ ဒီနှစ်ဟာ ဂျပန်ရုပ်ရှင်‌တွေ ဦးပြန်မော့လာတဲ့ နှစ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ ဒီနှစ်တစ်နှစ်တည်းမှာတင် ဂျပန်ကားကောင်းတွေ အများကြီးထွက်ခဲ့ပြီး ဒီနှစ်ရဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာ ဂျပန်ရုပ်ရှင်တွေ အခိုင်အမာနေရာယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နှစ်စမှာတင် ခိရိုရှိ ခူရိုဆ၀ ရဲ့ Wife Of A Spyတို့၊ ရူဆုခဲ ဟမဂုချိရဲ့ Wheel of Fortune and Fantasy, Miwa Nishikawaရဲ့ Under the Open Sky တို့ဟာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်‌ အသီးသီးမှာ ဆုမျိုးစုံကို ရရှိခဲ့သလို အခုနှစ်ဆုံးပိုင်းမှာလည်း Drive My Carဟာ ကိန်းလိုပွဲမှာပါ ဆုတွေရခဲ့ပါတယ်။ ခန်းရှင်းအပါအ၀င် တခြားရုပ်ရှင်ကောင်း ပေါင်းများစွာလည်း ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ Under The Open Skyဟာ ၂၀၂၀ တိုရန်တိုရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ စပြခဲ့တာမို့ ၂၀၂၀လို့ နာမည်တပ်ထားပေမဲ့ တကယ်တမ်း ...
Mayday (2021) Mayday (2021)============ဒီဇာတ်ကားလေးအကြောင်းပြောရရင်တော့ "Alice In the Wonderland " တို့လို့ "The Wizard of Oz"တို့လို လက်တွေ့ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုကနေ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲ။ မတူတာတော့ အထက်ကဇာတ်ကားနှစ်ကားလိုမျိုးမှော်ဆန်ဆန်ဇာတ်လမ်းအသွားအလာနဲ့ Fantasy ဖြစ်စေတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ Mystery ပုံစံနဲ့ dramaခင်းပြီး fantasy ဖြစ်စေတာပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ရိသဲ့သဲ့လုပ်တတ်တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ယောက်ျားလေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ နှိပ်စက်အနိုင်ကျင့်တတ်တဲ့အထက်လူကြီးရှိတဲ့ဟိုတယ်မှာ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့အန်နာတစ်ယောက်၊ မုန်တိုင်းကတိုက်မီးကပျက်တဲ့တစ်နေ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အသံကို ကြားပြီးတဲ့နောက် ထူးဆန်းတဲ့အိပ်မက်လိုနေရာလေးတစ်ခုကိုရောက်သွားရာကနေ...... Mayday ဆိုတဲ့ ဒီဇာတ်ကားလေးဖြစ်လာတယ်ဆိုပါတော့ . . . ဒီဇာတ်ကားလေးက Raindance Film Festival(2021) မှာ Best Cinematography Awardရထားတာဆိုတော့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ရိုက်ချက်လေးတွေဖန်တီးမှုတွေလေးတွေကလှပသလို အတွေးလေးတွေပါရသွားစေနိုင်တဲ့ကားလေး ဖြစ်တာမို့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ (ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်ရေးသားပေးသူကတော့ Chit Tee ဖြစ်ပါတယ်။)File Size - (2.14 GB)/(1.13 GB)/(700 MB) Quality – BluRay- (1080p)/(720p)/(480p) Duration - 2hr 10min Subtitle – Myanmar Hardsub Format ...
Fanny’s Journey (2016) Fanny's Journey (2016)==================IMDb Rating - 7.0/10တစ်ခါတစ်လေကျ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဘာမှမဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ့်ကိုအားကိုးနေတဲ့လူတွေကြောင့် သူရဲကောင်းဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားလေးလိုပဲ အရမ်းကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ် ကားတစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားထဲမှာပါ၀င်တဲ့ ဖန်နီဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်လေးဟာ အသက် ၁၃ နှစ်သာရှိသေးပေမယ့် အရမ်းကို သူရဲကောင်းဆန်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင်လေးဖြစ်ပြီး အပြင်မှာလည်း တကယ်ရှိခဲ့တာမို့ အရမ်းကိုလေးစားစရာ ကောင်းပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ ဂျူးလူမျိုးမိဘတွေဟာ သူတို့ရဲ့ သားသမီး တွေကို အသတ်မခံရစေဖို့ ဂေဟာတွေမှာအပ်ပြီးတော့ အသက်ဘေးမှ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြရပါတယ်။ အဲဒီ့ထဲမှာ ဇာတ်လိုက်ကျော်ဖန်နီနဲ့ ညီမနှစ်ယောက်ဟာလည်း အပါအ၀င်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဂေဟာ တွေကလည်း အမြဲတစေ ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံကြရတာမို့ နေရာမျိုးစုံရွှေ့ပြောင်းရင်း ဖန်နီတစ်ယောက် ဂေဟာမှကလေးတစ်သိုက်နဲ့ လွတ်မြောက်ရာနယ်မြေကို အရောက်သွားနိုင်မှာလား၊ သူရဲ့မိဘတွေနဲ့ရော ပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်မှာလားဆိုတာကို ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါတစ်ရံမှာ လက်တွေ့က စိတ်ကူးယဉ်ထက် ဆန်းကြယ်နေတဲ့သဘောကို သက်သေပြထားတဲ့ ရုပ်ရှင် တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၃ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်နဲ့ ရက်စက်လှတဲ့စစ်ပွဲရဲ့ အားပြိုင်မှုတွေကို ကြည့်ရှုရမယ့် အရမ်းကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ကားဖြစ်တာကြောင့် အားပေးကြည့်ရှုကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။(ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်ရေးသားပေးသူကတော့ Tar Tee Poe ...
Nightcrawler (2014) IMDb Rating (7.8) / Rotten Tomatoes (95%)အကြံအဖန်လုပ်တတ်တဲ့သူခိုး... အဲဒီလိုပြောလို့ ဒီ Nightcrawler ကို သူခိုးကားလို့မထင်ပါနဲ့။ ဒီကားဟာ တကယ်တော့ သတင်းထောက်ကားလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်။ မင်းသားက Jake Gyllenhaal ဆိုတော့ သရုပ်ဆောင် လန်ထွက်ချက်က ၂ချက်​လောက် နားရင်းအုပ်ချင်လာမှာပါ...ဇာတ်လမ်းကတော့ မင်းသားက အလုပ်မရှိတဲ့ သူခိုးဂျပိုးပါ။ ဒါပေမယ့် ပညာတတ်သူခိုး​ပေါ့ လူပေါ်လူဇော်လုပ်တတ်တယ်။ အဲဒါနဲ့ တစ်ရက်ကျ အနေအစားချောင်ပြီး မျိုးမျိုးမြက်မြက်ရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို သူတွေ့သွားတယ်။ အဲဒါက သတင်းရောင်းစားတဲ့အလုပ်... သတင်းရောင်းစားတယ်ဆိုလို့လည်း အထင်မကြီးပါနဲ့။ ကူလီကူမာ မျိုးစုံလုပ်ပြီး သတင်းတွေကို လီဆယ်ပြီး နေရာချ၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီး အထာမထားတဲ့သူ။ သူ့အနေနဲ့ ပညာရေးအရ အတန်းပညာမတတ်ပေမယ့် လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လို ဆက်ဆံရမလဲ၊ ဘယ်အချိန်မှာ ကလိမ်ကကျစ်ကျရမလဲဆိုတာ မွေးရာပါတတ်နေသလိုမျိုး...မင်းသား Jake Gyllenhaal ကလည်း ဒီလိုမျိုး အကျင့်ယုတ်၊ ကလိမ်ကျတဲ့ ...
Andhadhun (2018) IMDb Rating - 9/10 Google Users - 97% Rotten Tomatoes - 100% Box office - ₹110 crore Genere - Comedy, Crime, Thrillerအချစ်၊ဂီတ၊ပြစ်မှု၊သဲထိတ်ရင်ဖို စတာတွေကိုတစ်ကားထဲမှာ ကြည့်ရှု ခံစားရမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။အထူးသဖြင့် 'သူများမကောင်းကြံကိုယ့်ဘေးရန်ထိ' ဆိုတဲ့ စကားကို အဓိကမြင်မိစေပါတယ်။ထို့နောက် ဇာတ်ကားရဲ့ တင်ဆက်ပုံဖြစ်တဲ့ မြူးကြွတဲ့ သီချင်းသံစဉ်တွေနဲ့ အတူ ပျင်းရိစရာ ဇာတ်ဝင်ခန်းရယ်လို့ ရှာမတွေ့တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားအဖြစ် ချီးကျူးမိမှာပါ။မျက်မမြင်တစ်ယောက်အနေနဲ့လူသတ်မှုကို သိနေပါလျက် အမှုဖွင့်ချင်ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင် မျက်မြင်သက်သေဖြစ်ခွင့်မရှိတဲ့ အခါမှာ......ဒီဇာတ်ကားဟာ နာမည်ကြီး ဇာတ်ကားတစ်ကား၊IMDb Rating ထဲမှာလည်း နေရာကောင်းရထားတဲ့ဇာတ်ကားတစ်ကားဆိုတာသိရင်"ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း" ဆိုတဲ့အပိုင်းကို မဖတ်စေချင်ပါဘူး။(ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ရေးရတာ တော်တော်ခက်ပါတယ်။တချို့ ဇာတ်ကွက်တွေ ပေါ်သွားမှာ ကြောက်ရပါတယ်)" ဇာတ်လမ်း အကျဉ်း "အာ့ကက်ချ်က မျက်ကန်း စန္နရားပညာရှင်ပါ။မျက်မမြင်တွေဟာ အာရုံစူးစိုက်မှု ကောင်းတယ်တဲ့။အနုပညာရှင်တွေအဖို့ အာရုံစူးစိုက်မှု ...
Don’t Breathe (2016) IMDb Rating (7.1) / Rotten Tomatoes (88%)လက်ရှိ နာမည်ကြီး လူကြိုက်များနေတဲ့ Horror/Thriller တစ်ကားကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Evil Dead ကို ဖန်တီးခဲ့သူ Fede Alvarez ရဲ့ အကောင်းဆုံးလက်ရာတစ်ခုပါပဲ။ ဘက်ဂျက် ၉ သန်းပဲ အသုံးပြုခဲ့ပြီး လက်ရှိ သန်း ၁၄၀ အထိ Box office မှာတက်နေပါပြီ။ အိမ်လေးတစ်လုံးထဲမှာ သရုပ်ဆောင်လေး ၄-၅ ယောက်ကိုပဲ အားပြုပြီး တင်ဆက်သွားတာပါ။ဒါပေမယ့် ဇာတ်လမ်း၊ မထင်မှတ်တဲ့လှည့်ကွက်တွေ၊ သရုပ်ဆောင်၊ အသံပိုင်းတွေမှာ ပြောစရာမရှိအောင် ကောင်းမွန်လွန်းတဲ့အတွက် ဒီလို အောင်မြင်သွားတာပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ လက်ရှိတော့ IMDb 7.1 နဲ့ ရပ်တည်နေပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့တစ်ယောက်တည်းနေတဲ့ စစ်ပြန် မျက်မမြင်အဘိုးကြီးတစ်ယောက်ရဲ့အိမ်ကို ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေး ၃ ယောက်ရဲ့အကြောင်းပါ။ အလွယ်ဆုံးဖောက်ထွင်းမှုလို့ ထင်ပြီး ဝင်ရောက်သွားခဲ့ပေမယ့် ...
Catch Me If You Can (2002) IMDb Rating (8.1) / Rotten Tomatoes (96%)ဒါရိုက်တာက နာမည်ကြီး Steven Spielberg ဖြစ်ပြီး မင်းသားတွေကတော့မင်းသားကြီး Tom Hanks ရယ်…မင်းသားချော Leonardo တို့ရယ် ဖြစ်ပါတယ်…။ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကားဖြစ်သလို အော်စကာဆုတွေလဲရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားပါ။မင်းသားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Leonardo နဲ့ Tom Hanks တို့နှစ်ဦးရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်ကလည်း ကောင်းသလိုသူတို့နှစ်ဦးကြားက ဆက်ဆံရေး၊ ဇာတ်လမ်း တည်းဖြတ်ထားပုံကလည်းဇာတ်ကားကို ထူးခြားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်စေပါတယ်။ဇာတ်ရှိန် အတက်အကျ မှန်ပြီး၊ ပါသင့်တဲ့အချက်အလက် အားလုံးစုံအောင် ထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားနိုင်ပါတယ်။ဉာဏ်ကောင်းရဲ့သားနဲ့ လမ်းမှားရောက်နေတဲ့ လူငယ်လေးကို တာဝန်အရဖမ်းတာတင်မဟုတ်ပဲလမ်းမှန်ရောက်လာအောင် ပြုပြင်ပေးရုံသာမက နိုင်ငံအတွက်ပါ အကျိုးရှိအောင် အသုံးချနိုင်ခဲ့တဲ့Carl Hanratty အဖြစ် Tom Hanks က ပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။အထူးသဖြင့် ပြင်သစ်ရဲတွေ Frank ကို ဖမ်းသွားတော့ မရမက ပြန်ခေါ်ထုတ်ပြီးအမေရိကားကို ပြန်ခေါ်လာနိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပုံတွေက လူလူချင်းတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ အလေ့အထတွေကိုခံစားမိစေပါတယ်။ကြည့်မိသူတိုင်းကြိုက်ကြတာမို့ လက်လွတ်မခံစေချင်ပါဘူး။ File size… ...
Forrest Gump (1994) IMDb Rating (8.8) / Rotten Tomatoes (71%)Winston Groom ရဲ့ Novel ကိုအခြေခံလို့ Eric Roth ဇာတ်ညွှန်းရေးကာ ဒါရိုက်တာ Robert Zemeckis ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒီကားဟာ အော်စကာ Best picture, Best director, Best actor, Best adapted screenplay, Best visual effects, Best editing ဆုတွေရရှိခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသား Tom Hanks အတွက်တော့ ရှားရှားပါးပါး နှစ်နှစ်ဆက်(Philadelphia, Forrest Gump) အော်စကာရရှိစေခဲ့တာပါ။ Tom Hanks အပြင် Robin Wright, Gary sinise, Mykelti Williamson, Sally Field တို့ပါဝင်ပါတယ်။ Tom Hanks ဟာ Forrest ...
Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw Fast and Furious ကနေခွဲထွက်လာတဲ့ ၂၀၁၉ ရုပ်ရှင်ကားအသစ်ကို တင်ပေးထားပါတယ်။ အဓိက သရုပ်ဆောင်၂ယောက်ကတော့ ဒဝိန်းဂျွန်ဆန် နဲ့ ဂျေဆင် စတာသန် တို့ပါပဲ။The rock ကြီးနဲ့ transporter မင်းသားဆို ပိုသိကြမှာပါ။ဒီရုပ်ရှင်ကတော အက်ရှင်အသားပေးပါပဲ သာမန်လူတွေ မလုပ်နိုင်လောက်မယ့် အမိုက်စား အကြမ်းစားအက်ရှင်တွေနဲ့ပေါ့။ နောက်ပြီးတော့ မင်းသား ၂ ယောက် မတည့်အတူနေ ပုံစံနဲ့ ကြည့်ရှုတဲ့သူတွေကို ဟာသရသလေးတွေ ပျော်ရွွင်ဖွွယ်ရာဖြစ်အောင်ထည့်ပေးထားပါသေးတယ်။ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကို သေစေနိုင်လောက်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုးကို အသုံးချမယ့် အစွန်းရောက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီဗိုင်းရပ်စ်ကို သယ်ဆောင်ထားရတဲ့ စီအိုင်အေး အေးဂျင့်မလေးကို သူတို့နှစ်ယောက် လိုက်ကယ်ရင်း အဲဒီ အဖွဲ့နဲ့ ရင်ဆိုင်ကြတာပေါ့။ဒီမင်းသားကြီး ၂ ယောက် ကယ်တင်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦး။ အလန်းစားအက်ရှင်ခန်းတွေနဲ့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ စတန့်ခန်းတွေကို တစ်၀ကြီးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်လို့ ကြည့်လိုက်ကြပါဦးဗျို့......ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ Littleneo ပဲဖြစ်ပါတယ် File Size : (2.5 GB) and (1.2 GB) Quality : BluRay 1080p ...
The Fate of the Furious (2017) Fast and Furious 8 Fast & Furious ပရိသတ်တွေအတွက် USD 250 million အကုန်အကျခံပြီး အကောင်းဆုံးတင်ဆက်ထားတဲ့အတွက် Box officie မှာ USD 1 Billion ကျော် ဝင်ငွေရပြန်ရခဲ့ပြီး IMDb 7.2 ထိ Rating ရထားပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်လိုက်ကျော်ကြီး “ဒွန်မနစ်တိုရက်စ်တို” တစ်ယောက် သူရဲ့ ချစ်ဦးသူ “လတ်တီ” တို့ ကျူးဘားကျွန်းလေးမှာ ဟန်နီးမွန်းထွက်နေကြပါတယ်။ဒီအချိန်မှာ အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ Electromegnatic Pulse –EMP လို့ခေါ်တဲ့စွမ်းအားမြင့်ဗုံးကို အခိုးခံလိုက်ရပြီးဘာလင်က လက်နက်ကုန်သည်တွေ လက်ထဲမှာရောက်နေပါတယ်လို့ သတင်းရထားပါတယ်။ဒီဗုံးနဲ့သာတိုက်ခိုက်ရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဘယ်မြို့ကြီးမဆို စွမ်းအင်တွေပြတ်ပြီးကျောက်ခတ်ကလို ပြန်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက် အမေရိကန်အစိုးရ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ဗုံးအတွက်ကိုယ်ပြန်ပူပန်နေရပါပြီ။တစ်ခြားနိုင်ငံတစ်ခု ပိုင်နက်မှာဆိုတာ့ အစိုးရအနေနဲ့ တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေလွတ်လို့မရတဲ့အတွက် “လုခ်ဟော့ခ်” ကိုပဲ ဦးဆောင်ခိုင်းပြီး ပြန်ခိုးခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီ EMP ဗုံးကို Furious အဖွဲ့သားတွေ အောင်မြင်အောင်ခိုးလာနိုင်ပေမယ့် ဇာတ်လိုက်ကျော်ကြီးဒွန်က သစ္စာဖောက်ပြီး ...
The Fate of the Furious (2017) Fast and Furious 8